Isondlo esipheleleyo, yintoni le kwaye uyilandele njani? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
Akukho mmangaliso, ukutya okusempilweni yindlela esisiseko yokufezekisa ukunciphisa umzimba. Iziphumo zilunge ngakumbi ukuba kukho ulungelelwaniso phakathi komzimba, ingqondo kunye neemvakalelo. Isondlo esigqibeleleyo yindlela efuna ngokuchanekileyo le mali.
Iimpawu zonyango zokutya zisetyenziswa ngokweemfuno zomzimba kunye neemvakalelo zomntu. Isiseko kukusetyenziswa kwezinto ezintsha, ezingenazo iihomoni, kunye neziqholo zendalo kunye nemifuno yendalo. Imizi-mveliso, eyenziweyo kunye noshukela ococekileyo ayifakwanga kwisicwangciso sokutya.
1 Yintoni i-Holistic Nutrition malunga nayo?
2 Yintoni yokutya
3 Iintsika zendlela
4 Izibonelelo zokutya okunesondlo
Yintoni i-Holistic Nutrition malunga nayo?
Isondlo esigqibeleleyo sizama ukubandakanya izinto ezibonakalayo nezomzimba ukufezekisa ukufundiswa kwakhona ngokutya. Ingathi ifundisa indlela echanekileyo yokutya, kwaye ayicebisi kuphela ukutya okuthintelweyo kunye okwethutyana.
Isondlo esipheleleyo, impilo epheleleyo kunye nesisindo esifanelekileyo ziziphumo zendalo zendlela yokuphila. Injongo kukuphelisa inkqubo yesiqhelo yangoku, ebangela iingxaki zempilo kwaye ayisoloko ifanelekile emzimbeni.
Ukutya kwendalo kunye nokutsha
Iiproteni zemvelaphi yemifuno (iinkozo, imbewu kunye nesiriyeli)
Iziqhamo zeoyile (ii-walnuts, ii-walnuts, ii-hazelnuts, ii-almonds, njl.
I-Herbal teas kunye ne-infusions
Izinongo (i-turmeric, pepper, i-ginger, i-clove kunye nesinamoni)
Isicwangciso sokutya sisinceda ukuba siwazi umzimba wethu kwaye sifumanise ukuba ufuna ntoni ngawo onke amaxesha, oko kukuthi, ukhetho luya kuhlala luncedo. Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba umzimba kufuneka uphumle ukuze usebenze ngokusemandleni.
Ukongeza kwindlela efanelekileyo yokutya, le ndlela isekwe kwiintsika ezintathu:
Sukulamba: Lungelelanisa inani lokutya ngokomzimba wakho
Vary ukutyaYitya kangangoko kuvunyelwe phakathi kwamaqela okutya
Qhubeka: Ukuzivocavoca umzimba kuyanceda ukunciphisa umzimba kwaye ugcine umzimba usempilweni
Izibonelelo zokutya okunesondlo
Yomeleza ukhuseleko komzimba;
Ukuphucula imeko kunye nokunciphisa iziphumo ze-PMS;
Ilawula inkqubo yokwetyisa;
Iyanciphisa ukugcinwa kwamanzi;
Nciphisa uxinzelelo lomzimba okanye lweemvakalelo.